Dzidzo dzeCVVID - Galveston County Chikafu Bhangi
Galveston County Chikafu Bhangi uye vatinoshanda navo mabasa akakosha, uye zvakakosha kuti tirambe tichishanda tichishandisa nzira dzekuchengetedza dzakanakisisa. Nedzino nguva dzazvino, tinoona kuburitswa kunogona kuva kwakanyanya 'riini' uye kwete 'kana', uye sezvo tiri chivakwa cheveruzhinji tichave tichigadzirisa pano nekukurumidza sekuziva kwedu kuti kwave nenyaya dzakasimbiswa dzevanhu vanga vari ku Chikafu Bhangi. Tinoda kuve pachena sezvinobvira, asi tisingawedzere kune chero kutya.
Ticharamba tichishanda, tichishandisa nzira dzakanakisa dzekuchengetedza.
Isu tinoramba tichingwarira maitiro ekuchengetedza, tichitevera zvakanyanya CDC kuchengetedza uye kuchenesa maprotocol.
Kuchengetedza matanho evanozvipira, vashanyi nevashandi:
Tiri kutevera CDC yakakurudzira nzira dzekuvharisa uye ndakawedzera kuwanda kwekuchenesa uye kuuraya utachiona, kunyanya kutenderedza nzvimbo dzinotakura vanhu vakawanda (nzvimbo dzekuzvipira, maelevheti, dzimba dzemusangano, dzimba dzekugezera, nzvimbo dzekudya).
Vese vanofanirwa kupfeka kumeso pakunopinda kuGCFB yekutandarira.
Tembiricha iri kutorwa pese panopinda: vashandi, vanozvipira uye chero vashanyi.
Vashandi nevanozvipira vanokumbirwa kuti vachengetedze kushamwaridzana uye kana vasingakwanise vanofanira kupfeka kumeso. .
Vazvipiri vanoshanda muzvivakwa zvekuchengetera vanodikanwa kuti vashambe maoko nguva yavo isati yatanga, panguva yekuzorora, pavanoshandura mapurojekiti, uye mushure mekuchinja kwavo. Magorovhosi aripowo ekupfeka emapurojekiti ekuchengetera. Tiri kutora zvakare tembiricha pakusvika ..
Vashandi vari kudzidzira 'suka mukati, kusuka' nzira. Kuwedzera kwemawashing frequency. Kuchenesa nzvimbo dzekushandira kazhinji. Tembiricha dziri kutorwa panosvika ..
Vese vashanyi nevashandi vari kuratidza maitiro-ekuparadzanisa maitiro. Ex. Vazvipiri vanokurudzirwa kuti vashande mamita matanhatu pese pazvinogoneka uye angangoita maoko-kureba akaparadzana ..
Kukurudzira chero munhu anonzwa kusagadzikana kuti agare pamba.
Kuchenesa uye kuisa utachiona:
Kana / kana kesi yakasimbiswa ikaitika, nzvimbo yaive nemunhu wacho ichanyatsocheneswa uye isu tiri kutevera CDC yakakurudzirwa zviyero zvekuchenesa uye kuuraya utachiona. Vanhu vakasangana zvakanyanya nemunhu wacho vachaziviswa.
Chikafu hachizivikanwe kutakura coronavirus. Zvinoenderana neazvino Chirevo chakaburitswa neU.S.Food and Drug Administration, "Hatizive chero mishumo panguva ino yezvirwere zvevanhu zvinoratidza kuti COVID-19 inogona kutapurirana nekudya kana kurongedzwa kwechikafu.”Semamwe mavhairasi, zvinokwanisika kuti hutachiona hunokonzera COVID-19 hunogona kurarama pamusoro kana pazvinhu. Nechikonzero ichocho, zvakakosha kutevedzera nhanho ina dzakakosha dzekuchengetedza chikafu - yakachena, yakaparadzaniswa, kubika, uye kutonhora.